Soomaaliya oo heshay qeybtii ugu horeysay ee talaalka COVID-19 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo heshay qeybtii ugu horeysay ee talaalka COVID-19
Soomaaliya oo heshay qeybtii ugu horeysay ee talaalka COVID-19
March 15, 2021 Abdi Omar Bile Somalia 0
Talaalka oo ka soo degay Muqdisho. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah heshay 300,000 xabo oo talaalka COVID-19 ah, sida ay sheegaty Wasaaradda Caafimaadka.
Talaalka oo noociisu yahay Oxford-AstraZeneca ayaa ah qeybtii ugu horeysay oo soo gaarta dalka kuyaala Geeska Afrika oo la halgamaya sare u kicii labaad oo kaga yimaada fayruska saf-marka ah.
Shaqaalaha caafimaadka, dadka da’da ah, iyo dadka la nool cudurada raaga ayaa ah kuwa ugu horeeya ee lala beegsan doono talaalka, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa diiwaangelisay 8,946 kiis oo COVID-19 tan iyo bishii Maarso 2020, sida ay sheegayso xogta Wasaaradda Caafimaadka.
Madaxweynaha Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay duqa degmada Boosaaso sababo la xiriira eedaymo musuqmaasuq
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu sheegay masuul dowladda katirsan. Abaanduulaha ciidamada xooga Soomaaliya Janaraal Cabdulaahi Cali Caanood [...]
Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin oo wajahaya dhalleecayn balaaran oo ku saabsan kiiska Ubax Tahliil
Muqdisho-(Puntland Mirror) Agaasimaha haayada nabadsugida Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin ayaa wajahaya dhalleecayn balaaran kadib markii Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu u qabtay 48-saac in uu ku keeno warbixin buuxda oo la [...]